Fandikana fepetra :: Polisy voasazy noho ny fanaovana taingin-droa tamin’ny môtô • AoRaha
Fandikana fepetra Polisy voasazy noho ny fanaovana taingin-droa tamin’ny môtô
Nilatsaka ny sazy tamin’ny polisy iray hitan’ny olon-tsotra nanao taingin-droa tamin’ny môtô teny an-dalambe. Naato tamin’ny asany avy hatrany ity polisy iray, rehefa avy nanao fanadihadiana avy tamin’ny sary nalefan’ny olon-tsotra tao amin’ny tambajotran-tserasera « Facebook », ny Polisimpirenena.
Kodiaran-droa vaovao ampiasain’ny mpitandro filaminana amin’ny asany no azon’olona sary. Vehivavy no mitondra azy, raha nitaingina tao aoriana kosa ilay polisy tsy nanaja ny fepetra fandraràna ny taingin-droa amin’ny môtô ao anatin’izao hamehana arapahasalamana hiadiana amin’ny valanaretina izao. Niharihary ny fanamiana maha mpitandro filaminana nanaovan’ilay polisy.
Raha ny tokony ho izy dia tsy azon’olon-tsotra atao ny mitondra ireny fitaovana ampiasain’ny mpitandro filaminana ireny. Mitovy amin’ny basy na fanamiana fitondran’izy ireo miasa ihany izany.
Ny fampisehoana fihetsika tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy no antony nampiatoana azy tamin’ny asany, araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Polisim-pirenena. Tokony hipetraka amin’ny maha maodely azy ny sokajin’olona tahaka ireo mpitandro filaminana sy ireo olom-panjakana rehetra.
Mampanantena ny fitohizan’ny fiaraha-miasa avy amin’ny vahoaka amin’ny fampiharana ny lalàna ho an’ireo mandika izany, na olon-tsotra na mpitandro ny filaminana, ny Polisim-pirenena malagasy.
Fihadiana namoa-doza Tovolahy telo namoy ny ainy nihotsahan’ny tany
Tsenan’ny zavakanto :: Korontanin’ny valanaretina ny asa fiveloman’ireo mpihira gasy